Soomaali Badan Oo Jejabiyey Falaasadahoodii Shaaha, Ka Dib Markii Lagu Arkay Kiniin Gudahooda Ku Jira | Himilo Media Group
Soomaali Badan Oo Jejabiyey Falaasadahoodii Shaaha, Ka Dib Markii Lagu Arkay Kiniin Gudahooda Ku Jira
Kenya (Himilo) – Soomaalida ku xidhiidhta baraha bulshada ee Internet-ka ayaa si aad ah iskula wadaagayay muuqaallo ay ku burburinayaan Falaasadaha shaaha iyagoo sheegaya in ay ku jiraan saddex Xabbo oo Kiniin ah, kiniinkaasi oo ay sheegayaan in laga qaado cudurka Kansarka iyo cudurro kale oo halis ah.
Dadka qaar ayaa jejibiyay tFalaasadahoodii Shaaha, iyagoo muuqaallo iska duubaya kaddibna soo dhigay baraha bulshada, dadkaasi ayaa badankooda ku nool gobolka Soomaalida ay degto ee waqooyi bari Kenya.
Wasiirka wasaarada caafimaadka ee Ismaamulka Garissa Axmed Nadir Cumar oo BBC la hadlay ayaa sheegay inayna jirin wax cudur ah oo laga qaadaayo Falaasadaha.
Waxa uu sheegay in dadweynaha ay xaq u leeyihin inay caafimaadkooda ilaashadaan, balse waxaa uu leeyahay wax walbo oo dalka Kenya soo galaaya baadhitaan ayaa lagu sameeyaa.
Weriyaha BBC ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa goob joog u ahaa qaar ka mid ah dadka markii ay Falaasadahooda jabinayeen, waxayna u sheegeen in hadda wixii ka dambeeyo ayna adeegsan doonin falaasadaha balse ay Kildhi isticmaali doonaan.
”Waxaan arkay gabdho deriskeyga ah oo falaasadahoodii jabiyay oo sheegaya in ay ku arkeen saddex xabbo oo kiniin ah oo cudurka kansarka laga qaado, aniga keyga hadda ayaan doonayaa inaan jebiyo, waxaan doonayaa inaan eego waxa ku jira, saaka shaah kuma shubanin” sidaasi waxaa tidhi Xariiro Xassan oo magaalada Garisso ku nool.
Dadka ku nool deegaanadaas ayaa sheegaya in ula jeedada faalasta loo soo geliyay kiniinku ay tahay in “iyaga lagu laayo”, waxayna ku doodayaan in cudurka Kansarka aanu xilliyadii hore jirin, balse uu hadda soo batay.
Xariiro Xassan ayaa sheegtay in wiilkeeda yar uu saaka ku yidhi ” Hooyo wixii hadda ka dambeeyo, shaaha waan iska deynayaa, subixii Loxooxda waxaan ku cabi doonaa biyo”.